Ireo rindranasa efatra tsara indrindra hamoahana zip amin'ny Android | Androidsis
Ny rindranasa tsara indrindra handefasana rakitra amin'ny Android
Ilaina tokoa ny manindry ireo rakitra, satria manampy antsika handefa rakitra izay mavesatra amin'ny olon-kafa amin'ny ankapobeny. Ka fomba tsara itehirizana toerana izany. Izy io dia zavatra ataontsika amin'ny fahita matetika handefasana rakitra amin'ny alàlan'ny mailaka, ary koa amin'ny finday Android. Amin'ity tranga ity dia mila rindranasa hamoahana ireo zana-kazo ireo izahay.
Ny ampahany tsara dia ny fisian'ny rindranasa marobe ahafahantsika mamoaka rakitra amin'ny Android. Ka raha mandefa anay izy ireo na mandefa andian-drakitra voafintina ho antsika, dia azontsika atao ny manokatra azy ireo ary amin'izany dia hampiasa azy io amin'ny fitaovantsika.
Ny fisafidianana ireo karazana fampiharana hampihenana ny rakitra dia nitombo, ary manana vitsivitsy izay fantatry ny maro aminareo tokoa izahay. Misongadina izy ireo amin'ny maha-fitaovana azo itokisana azy indrindra raha ny amin'ny fanatanterahana ity asan'ny fisintomana rakitra ity amin'ny Android. Fampiharana inona avy no nahatonga ny lisitray?
Manomboka amin'ny rindranasa fantatra sy ampiasain'ny mpampiasa izahay. Azo antoka fa ny ankamaroan'izy ireo dia nametraka izany tamin'ny solo-sain'izy ireo, fa manana ny kinova fampiharana ho an'ny telefaona Android koa izahay. Ka io dia mahatanteraka ny tanjona mitovy amin'ilay tany am-boalohany ananantsika amin'ny solosaina. Tsy manana mistery be loatra amin'io lafiny io. Hahafahantsika mamoaka rakitra, ary manana fiasa izay mampiavaka azy amin'ny rindranasa hafa koa izy. Satria afaka manamboatra rakitra efa simba izahay, izay mety hahasoa be amin'ny fotoana mihoatra ny indray mandeha. Na dia asa misy aza ao amin'ny kinova aloa.
Developer: RARLAB (navoakan'ny win.rar GmbH)
Faharoa, hitantsika ity rindranasa hafa ity izay hanatanteraka ilay asa mitovy amin'ny famongorana ireo rakitra amin'ny finday amin'ny fomba tsotra. Ny interface dia tena tsotra sy intuitive, ka tsy hanana olana amin'ny fiasan'io ianao. Mety ho iray amin'ny mora ampiasaina indrindra izy io. Amin'ity rindranasa ity dia hahafahantsika mamehy sy manafoana ny fisie amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fomba tena tsotra. Safidy tsara io raha mitady zavatra tsotra ianao.
Maimaimpoana tanteraka ny fampidinana an'ity rindranasa ity. Ary koa, tsy misy mividy na dokam-barotra ao anatiny. Antony mahatonga ny mpampiasa maro miloka amin'izany. Maimaimpoana tanteraka.
Amin'ny laharana fahatelo dia ahitantsika ity rindranasa ity izay manatanteraka ireo fiasa mitovy amin'ny teo aloha. Ka handeha isika afaka mamaha ny zotran-drakitra amin'ny fomba tsotra. Fampiharana iray izay amin'ny lafiny famolavolana dia tsotra, mitovy amin'ilay teo aloha. Fa tsy dia tsotra loatra, fa toa tsy niasa tamin'ny famolavolana azy io. Ankoatr'izay dia afaka mamindra rakitra amin'ny telefaona isika, ary manao asa isan-karazany amin'izy ireo. Ka manome antsika asa fanampiny, izay mahatonga azy io ho feno kokoa ho an'ny mpampiasa.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita doka ao anatiny. Mety hahasosotra azy ireo indraindray.
7Zipper - mpikaroka rakitra
Developer: PolarBear malefaka
Manidy ny lisitr'ireo rindranasa ireo izahay miaraka amin'ny iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny mpampiasa finday Android. Hiaraka aminy isika afaka manery sy mametaka rakitra Amin'ny fomba tsotra. Ka manome antsika fiasa bebe kokoa noho ny hafa izay manala ny famoahana endrika fotsiny. Ho fanampin'izay, dia tokony homarihina fa manana fanohanana karazan-drakitra maro isan-karazany izy, amin'izay azontsika atao ny mampiasa azy amin'ny karazana rakitra rehetra amin'ny ankapobeny. Misy totalina endrika 37 no tohanan'ny fampiharana. Noho izany dia be dia be izy io. Raha ny famolavolana dia tsotra, mora ampiasaina izy io, saingy natao tsara.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka sy fividianana ao anatiny aza izahay.
B1 Archiver zip zotra unrar
Developer: Rindrambaiko vondrona B1
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny rindranasa tsara indrindra handefasana rakitra amin'ny Android
Ny fandalinana Facebook dia mandefa kinova tsy misy doka amin'ny alàlan'ny famandrihana
Adobe Photoshop Express dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana ny Perspective Correction function